juillet 2018 · déliremadagascar
Socio-eco	 30 juillet 2018 R Nirina
Fampandrosoana ny faritra Atsimo: Nampiseho ny firaisankinany ny FIZAFATO
Mbola nampiana ny seza 5000 nampiasaina nandritra ny fankalazana ny faha-40 taonan’ny fikambanan’ny zanaka ampielezan’ny faritany Toliara (FIZAFATO). Continuer la lecture →
Socio-eco	 29 juillet 2018 R Nirina
Mpandraharaha avy any Dubai: Hanohana ny tetikasan’ny mpianatra
Mitohy ny fiarahamiasa eo amin’ny onversite GSI sy ny mpandraharaha ara-toekarena Ny Rado Rafalimanana. Continuer la lecture →
OMS : Hamafisina ny fanaovana vakisiny
Olana amin’ny tsy fahavitan’ny vakisiny any amin’ny faritra sasany ny tsy fandriam-pahalemana. Continuer la lecture →
Fandefasana vola mankany ivelany: Azo atao amin’ny alalan’ny Postransfer
Ao anatin’ny firenena Afrikanina dimy voalohany mampiasa ny Postransfer i Madagasikara. Continuer la lecture →
Socio-eco	 27 juillet 2018 lynda
FAHAZOANA LOHARANOM-BAOVAO: Hohamoraina
Manana vina hamolavola lalàna mifanandrify amin’ny fahazoana loharanom-baovao ny ministeran’ny serasera sy fifandraisana amin’ny andrim-panjakana. Continuer la lecture →
FIZAFATO: Hitotorebika eny amin’ny ANS Ampefiloha
Zanak’i Toliara avy eto Antananarivo sy any amin’ny faritra maherin’ny 3000 no handrasana ho avy amin’ny fihaonamben’ny FIZAFATO rahampitso 28 jolay 2018. Ho fanamarihana ny fankalazana ny faha-40 taonan’ny fikambanan’ny zanaka ampielezan’ny faritany Toliara na FIZAFATO ity lanonana hotanterahina etsy amin’ny kianjan’ny ANS Ampefiloha ity, hoy ny birao nasionaly sy ny komity mpanomana ny fankalazana. Hanomboka amin’ny 10 ora maraina ny fety ka hifandimby hanafàna izany ireo mpanankato zanak’i Toliara. Hisy ny fizaràna nofon-kena mitam-pihavanana satria omby folo no hovonoina amin’io fotoana io.
Ny taona 1978 no nitsangana ny FIZAFATO. Fanabeazana ny olona hahay hifanampy no fototra ijoroan’ny fikambanana. Manoloana izany, miezaka hatrany ny FIZAFATO mitondra ny heviny eo anivon’ny fitondram-panjakana mba hampandrosoana ny faritra Atsimo. “Tsy miady amin’ny fanjakana izahay fa mangataka na mandroso hevitra kosa mba hahamety kokoa ny faritr’i Toliara”, hoy ny filoha nasionalin’ny fikambanana, Maharante Jean de Dieu nandritra ny valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety androany 27 jolay 2018. Hevitra efa naroso ny fanajanonana ny fitaterana rano amin’ny alalan’ny kamiô. Ny fampiasana ny “pipeline” hitarihana ny rano no vahaolana hitan’ny fikambanana hamahana ny olan’ny tsy fisian-drano any Atsimo.
Socio-eco	 26 juillet 2018 lynda
OLONA VOAN’NY SIDA: Mitombo isaky ny telo minitra
Tanora miisa telopolo isaky ny ora iray no tratry ny tsimok’aretina VIH/SIDA ny taona 2017, araka ny tatitra nataon’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny zaza sy ny vehivavy (UNICEF). Continuer la lecture →
PAOSITRA ATY AFRIKA: Lany andro ny fitsipika
Voalohany i Madagasikara no mampiantrano fivoriana iraisam-pirenena momba ny paositra. Nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana faha-dimy momba ny « conférence des plénipotentiaires de l’Union Panafricaine des Postes (UPAP) ny filohampirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina omaly 26 jolay 2018 teny amin’ny CCI Ivato. Continuer la lecture →
politique	 26 juillet 2018 R Nirina
Antoko FREEDOM : Miady ny hamerenana ny hasin’ny politika
Nahatsiaro ny faha 10 taona nahalasanan’i Herizo Razafimahaleo ny antoko Freedom ny Alarobia 25 Jolay 2018 lasa teo. Continuer la lecture →
Socio-eco	 25 juillet 2018 R Nirina
DAVIDA MAITSO KELY: Tafiala tao an-davaky ny liona
Nanazava ny antony nialàny tao amin’ny antoko politika HVM ny ministry fanabeazam-pirenena teo aloha, Paul Rabary. “Efa feno ny fepetra ka tsy mitovy hevitra intsony”, hoy i Paul Rabary nandritra ny valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety ny 25 jolay 2018. Continuer la lecture →